Onward (2020) – Gold Channel Movies
Gold Channel Movies
Video Sources 3380 Views
Their quest begineth.Feb. 29, 2020USA103 Min.PG
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နတ်သူငယ် မှင်စာ ညီအကို နှစ်ယောက် Lan နဲ့ Barley ဆိုရင်ဖြင့် သူတို့အသက် အရမ်းငယ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အဖေ ဆုံးသွားတာကြောင့် ဓာတ်ပုံထဲမှာသာ မြင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ သူတို့အသက် အသက် ၁၆နှစ်ကို ကျော်သွားတဲ့ အခါမှာ သူ့အဖေ ထားခဲ့တဲ့ မှော်တောင်မွှေးကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ မှော်တောင်မွှေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ သေနေတဲ့လူကို တရက် ၂၄နာရီစာ အသက်ပြန်ရှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။
ဒါပေမဲ့ မတော်တဆလုပ်မိတာကြောင့် သူတို့အဖေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အောက်ပိုင်းပဲ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်ပိုင်းကို 24 နာရီ မပြည့်ခင် တကိုယ်လုံးပေါ်လာပြီး သူတို့သားအဖ သုံးယောက် ဆုံဆီးအောင် ဒီကြားထဲရှိတဲ့ အတားအစီး မှန်သမျှကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရတော့မှာပါ
Toy Story4ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ Disney နဲ့ Pixer နဲ့ ပေါင်းရိုက်တဲ့ animation ကားဆိုတော့ ဇာတ်အိမ်ရော အသံပိုင်းတွေရော quality ပိုင်းရောက မမိုက်မှာတော့ မပူပါရပါဘူး။ အသံသရုပ်ဆောင်ပိုင်း အနေနဲ့လည်း Tom Holland ,Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus အပြင် Octavia Spencer လုံးဝ အမိုက်စားကြီးတွေပဲ ပါဝင်ထားတာပါ။ Director အနေနဲ့လည်း monsters university ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့Dan Scanlon က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
Translated by Thar Nyo Lwin
Encoded by mk
Quality – Web-DL
Size – 910MB / 310MB
Genres – Animation, Adventure, Comedy
Run Time – 1 Hr 42 mins
Original title Onward
IMDb Rating 7.7 12,239 votes
TMDb Rating 8 281 votes
Download Yandex SD ျမန္မာ 310MB6days gcmovies
Download Yandex HD ျမန္မာ 910MB6days gcmovies
Download Megaup SD ျမန္မာ 310MB6days gcmovies
Download Megaup HD ျမန္မာ 910MB6days gcmovies
Download Mega SD ျမန္မာ 310MB6days gcmovies
Download Mega HD ျမန္မာ 910MB6days gcmovies
Download GDrive SD ျမန္မာ 310MB6days gcmovies
Download GDrive HD ျမန္မာ 910MB6days gcmovies
Ruyi’s Royal Love in the Palace (2019) ျမန္မာစာတမ္းထိုး
© 2019 by Gold Channel Movies. All Rights Reserved.
Myanmar Digital MarketingHap Eye Digital Marketing Agency